यी ४ चिज घरको ढोका अगाडि भुलेर पनि नराख्नुहोला -
यी ४ चिज घरको ढोका अगाडि भुलेर पनि नराख्नुहोला
हामी तपाइँहरुलाई सधै प्रेरणादायी कुराहरु दिने गरेका छौ। प्रेरक भनाईहरु, मनछुने लाईनहरु, जीवनशैली, व्यक्तित्व विकास र साथ् साथै सुन्दर जीवनको लागि स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारीहरु पनि पस्किने गरेका छौ। आशा छ हाम्रो यी जानकारीहरुले तपाइँहरुलाई केहि न केहि सहयोग अवश्य पनि पुर्याइरहेको छ। आज पनि हामीले यहाँ तपाइँहरु माझ एउटा जानकारीमुलक कुरा लिएर आइसकेका छौ।
घरको मुल ढोका अगाडि कहिल्यै पनि नराख्नुस यी चिज बास्तु शास्त्र अनुसार घरको मुल ढोकाको बिशेष महत्व हुन्छ किन भने यो स्थानमा भगवानको सबैभन्दा पहिला कृपा दृष्‍टि पर्ने मानिन्छ। त्यस कारण घरको मुल ढोकाको अगाडि यी ४ चिज राख्नु हुँदैन। धेरै जसो मानिस घर सजाउन बिभिन्न किसिमका बिरुवाहरु लगाउने गर्दछन। जसमा मुख्य ढोका अगाडि काँडा भएका बिरुवा पनि लगाउने गर्दछन्।
यसो गर्नु हुँदैन किन भने यसबाट नकारात्मक उर्जा आउछ र आउन लागेको सकारात्मक उर्जा रोकिदिन्छ। त्यसकारण ढोका अगाडि कांडा भएको बिरुवा लगाउनु हुँदैन। घरको ढोका अगाडि भांचिएको कुर्सी वा पलङ राख्नु हुँदैन। भांचिएको कुर्सी वा पलङ राख्दा घरमा अशान्ती हुने मानिन्छ। घरको ढोका अगाडि फोहोरो वा माकुराको जालो हुनु हुँदैन। यसो भएमा भगवान देबी देवता घरमा आउँदैनन भनिन्छ। यदी घरको मुल ढोका अगाडिनै जुता चप्पल खोलेर राख्ने बानी छ भने हटाउनु होस ढोका अगाडिनै जुता चप्पल राख्दा माता लक्ष्मी प्रबेश गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता रहेको छ।
पुरुषलाई थाहा हुदैन महिलाका यी ७ रहस्यहरु, जान्नुहोस
तपाइलाई रिस कतिको उठ्छ? रिसले निम्त्याउन सक्छ यस्ता खतरनाक रोगहरु जानीराखौ
आजको राशिफल २०७७ भदौ ०७ आइतबार !!
आजको राशिफल २०७७ भदै ६ शनिबार !!